सरकारले ल्यायो कर्मचारीको लागी नयाँ पेन्सन योजना, यस्ता छन् सुविधा « Lokpath
२०७६, ३१ भाद्र मंगलवार १२:५२
सरकारले ल्यायो कर्मचारीको लागी नयाँ पेन्सन योजना, यस्ता छन् सुविधा
प्रकाशित मिति : २०७६, ३१ भाद्र मंगलवार १२:५२
काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले आफ्नो ५८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सरकारी कर्मचारीको पेन्सनको लागी नयाँ योजना लागु गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कार्यक्रम उत्घाटन गर्दै उक्त योजना औपचारिक रुपमा शुभारम्भ भएको घोषणा समेत गर्नुभएको हो ।
योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषु नाम दिईएको यस योजनामा २०७६ साउन १ पछि नियुक्त भएका स्थायी निजामती , प्रहरी, सैनिक, शशस्त्र, र नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारी समावेश हुन् सक्ने छन् ।
यो योजना लागु भएपछि सरकारी सेवामा आबद्ध भएका कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत काटिनेछ । साथै त्यहि अनुपातमा नेपाल सरकारले पनि सहयोग गर्नेछ । प्रत्येक ३ बर्षमा निवृत्तिभरण रकम १० प्रतिशतका दरले बढीमा ५ पटक बढ्ने संचय कोषले जनाएको छ ।
यदि कोहि कर्मचारी २० वर्षे सेवा अवधी पुरा नगरी सेवाबाट बाहिरिएमा सेवा अवधीमा जम्मा गरेको रकम , व्याज र त्यसबाट प्राप्त मुनाफा समेत पाउनेछन । २० वर्षे अवधी पुरा भएका कर्मचारीले भने निवृतीभरण कोष ऐन २०७५ मा लागु भए अनुसार भुक्तानी पाउनेछन ।
Tags: पेन्सन योजना
दलितको बेग्लै सुर्य कहाँ छ ?
भानु दाहाल झाडिभित्र एक थुङ्गा फुलेको गुलाफजस्तो छोरो बुहारी लिनगएको, अझै आइपुगेको छैन
स्वास्थ्यमन्त्रीमा कोरोना नेगेटिभ
काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालमा गरिएको कोरोना परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको छ ।
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। मंगलबार थप
कपिलवस्तुमा थप २४ जनामा कोरोना पुष्टि, जिल्लाभर संक्रमितको संख्या १ सय ९ पुग्यो
काठमाडौं – आज कपिलवस्तुमा थप २४ जना कोभिड १९ कोरोना भाइरस पोजेटिभ पुष्टि
रोचक तर मार्मीक: मस्तिष्कको अप्रेसन गर्दा बिरामीले यसरी बजाए मादल
पर्सामा कोरोना संक्रमित अब ६ जना मात्रै बाँकी !
लकडाउन र कर्फ्यूबारे साउदी सरकारको नयाँ व्यवस्था, नेपाली दूतावासले गरायो…
रुकुम हत्या प्रकरणमा नायिका रिमा विश्वकर्मा बोलिन्-"कुटपिट गरेर
एकैपटक ९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, नेपालमा कुल
नेपालमा कोरोना अपडेट : ७७२ पुगे संक्रमित, आजै
कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालले औषधिको रुपमा गाँजा बाँडेपछि...
कोरोनाको प्रकोप : अमेरिकामा घट्न थाले मृतक र